उपत्यकाको सेरोफेरोमा रहेको रमणीय गन्तव्य-बल्थली ! - ParyatanBazar.com
उपत्यकाको सेरोफेरोमा रहेको रमणीय गन्तव्य-बल्थली !
साउन ८, काठमाडौं। उपत्यकाको सेरोफेरोमा रहेका रमणीय गन्तव्य मध्ये बल्थली पनि एक हो । साइकल यात्राका सौखिनहरूको रोजाइमा पर्ने उत्कृष्ट गन्तव्य । बल्थली यात्राको योजना बनाउँदा एक दिने वा दुई दिने बनाउन सकिन्छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो नमोःबुद्ध । पौराणीककालमा भोकले सिथिल भएर मर्न लागेकी बघिनीका पाँचवटा डमरुले दूध चुसिरहेको देखेर राजकुमारलाई करुणा जागेर आयो । डमरु बचाउन उनले मर्न लागेकी बघिनीलाई आफ्नो रगत चुसाए र शरीरको मासु खुवाए ।
बघिनीले खाएर बचेको हाडखोर जम्मा गरेर समाधी बनाइयो । त्यसको ३,५०० बर्ष पछि गौतम बुद्ध आए । उक्त ठाँउको तीन पटक परिक्रमा गरे पछि पहिलेको महासत्वले पुनः अवतार लिएको बताए । यसको नाम उनै बुद्धले नमोः बुद्ध राखेको विश्वास गरिन्छ ।